Iindaba -Iimpahla zePinyang zenza iworkshop yokuziqhelanisa nokwenza izinto ngokudibanisa ukuluka, ukudaya kunye nokuthunga
Impahla ye-Pinyang yenza iworkshop yokuziqhelanisa nokwenza izinto ngokudibanisa ukuluka, ukudaya kunye nokuthunga
Ii-odolo zembatho ezimbini okanye ezintathu kuphela ezinokwamkelwa
Ngenxa yokungena kwe-Alibaba's "rhinoceros fektri", Inguqu ekrelekrele kwimveliso yokuvelisa iingubo iye yaba sisihloko esishushu kwishishini kwakhona. Ngapha koko, ukusukela ukuba ifashoni yempahla yophawu yamanye amazwe ithande ukuba "yimfashini ekhawulezayo", ibe sisakhono esikhethekileyo kwimizi-mveliso yokuvelisa iimpahla ukuqinisekisa ukuba banokuphumelela kukhuphiswano olunamandla lokuhlangabezana nemfuno yemveliso yeentlobo ngeentlobo, ibhetshi encinci kunye impendulo ekhawulezileyo.
Njengeshishini elidala lamalaphu elinembali ye-12 yeminyaka, ukubamba lonke ithuba elinikezwe ngamaxesha sisixhobo somlingo sokunyamezeleka. Ukusukela ngo-2019, le projekthi itshintshiwe, ukusuka ekulukeni, ukuprinta kunye nokudaya ukuya kuthungelwano kunye nokuthunga ngetekhnoloji yolwazi Imodeli yokubonelela ngemveliso ye-agile kunye nemveliso eguqukayo isekiwe kuwo onke amakhonkco kwikhonkco lonke leshishini. Namhlanje, ixesha lokuhambisa le-Pinyang yee-odolo zesikali sele liqhubekile ukusuka kwiintsuku ezingama-40 ukuya kwiintsuku ezili-15, kwaye ii-odolo zokubuya ngokukhawuleza (iiodolo ezinamaqhekeza angaphantsi kwama-2000) ziye zadlulela kwiintsuku ezisi-7. Enkosi kule mpendulo ikhawulezayo.
Incinci iodolo, kokubi ngakumbi. Oku kukuvumelana kweshishini lempahla. Okwangoku, ezinye iiodolo zasekhaya ziziqwenga ezi-2 okanye ezi-3, kwaye kukho iziqwenga ezili-128 kuphela ze-SKU enye yohlobo lomdlalo wezemidlalo phesheya, okuyimfuno epheleleyo yebhetshi encinci, ibhetshi emininzi kunye nexesha lokuhambisa ngokukhawuleza. Amashishini ukulandela ukusebenza ngokukuko, kuhlalutyo lokugqibela kukuphucula ukhuphiswano, abanye abanako ukwamkela iiodolo onokuthi uzithathe, olu lungelo. Oku kuluncedo kuphuhliso lwexesha elide lwamashishini. "